Ogaden News Agency (ONA) – Semayawi Party (Xisbiga Bluuga) oo ugu baaqaya shacabka Itobiya banaanbax 25ka May
Semayawi Party (Xisbiga Bluuga) oo ugu baaqaya shacabka Itobiya banaanbax 25ka May
Xisbiga la magac baxay Semayawi Party (Xisbiga Bluuga), oo ah xisbi dhalinyarada iyo haweenka Itobiya ay isla unkeen ayaa ugu baaqay shacabka dagan Adisababa inay ku soo banaanbaxaan Midowga Afrika hortiisa maalinta 25ka May oo ah maalin loo dabaadagayo asaaska ururkan oo 50 jirsaday.
Xisbiga Bluug ayaa ugu baaqaya xisbiyada siyaasiga ah, ururada bulshada iyo muwaadiniinta inay dhamaantood maalintaa si nabadgalya ah ugu soo banaanbaxaan goobta lagu dhigayo dabaaladagga AU (MA), banaanbaxaa oo lagaga soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee shacabka lagu hayo, faragalinta xukuumadda ay ku hayso diimaha, musuq-maasuqa iyo sicir bararka gaadhay heera aanay danyarta ku sii noolaan karin.
Wuxuu xisbiga ugu baaqayaa dadka shacabka ah inay maalmaha 23-25ka bishan soo xidhaan dhar madow ah say u muujiyaan diidmada shacabka iyo cadhadooda.
Xukuumadda EPRDF ayaa dhaqan ka dhigatay inay dhagaha ka fureysato kacdoonka shacabka oo halku-dhigeedu uu yahay Qori ayaan ku qabsanay xukunka – Qori umbaana nalagaga qaadi karaa. Waxaa la filayaa in banaanbaxan uu noqdo midkii midayn lahaa shacabka Itobiya oo sanadkii la soo dhaafay ay banaanbaxayeen oo kale ah dadka muslimiinta ah.